နိုင်ငံရေးကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေ – AHUNT BHONE MYAT
အသက် ၂၀၊ ၂၅ နှစ်ဝန်းကျင် လူငယ်လေးတွေရောက်လာ၊ စကားပြောကြတိုင်း ဒီမေးခွန်းတစ်ခုကို မေးမြဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှ ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ်နေကြဟန် ရှိပါတယ်။ တချို့ ကျတော့လည်း နိုင်ငံရေးဆိုတာ နှာခေါင်းရှုံ့စရာလို့ယူဆပြီး တစ်သက်လုံး ဝေးဝေးရှောင်ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်စီလူတန်းစား အီလစ် (Elite) တွေပြောတဲ့ စကားသံတွေကြားပြီး “နားဝေတိမ်တောင်” ဖြစ်နေကြပုံရပါတယ်။
2 thoughts on “နိုင်ငံရေးကို နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့တဲ့ ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေ”
မန်မာလူမျိုးဟာ တခြားနေရာများမှာ ညံ့ချင်ညံ့မယ်။ နိုင်ငံရေးအသိမှာတော့ ထိပ်တန်းကရှိနေတဲ့ လူမျိုးဖြစ်တယ်။ နယ်ချဲ့အစိုးရက ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးတို့၊ ဒိုမီနီယံအဆင့်ပေးမယ်တို့နဲ့ လှည့်စားခဲ့ပေမယ့် လိမ်တာကို လိမ်မှန်းသိ၊ ညာတာကို ညာမှန်းသိလို့ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးမှ တစ်ပါး ဘာမှမလိုချင်ဘူးလို့ အပြတ်ပြောခဲ့တာပါ။
It is not realistic at all. How many people did he meet and talk, especially our farmers? During British colony, it was guided by leaders like General Ag San and group. Political Education is essential all over the world. Degrading its value is just foolish.
Best for Myanmar Youth and Candidates of previous campaigners who lo sen by Alibaba.